Madagasikara sy ny ‘covid organics’ - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kihon-dalana iray indray no diavin’i Madagasikara taorian’ny lahatenin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin’ny alin’ny alahady 19 aprily 2020, nalefa tamin’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM ary ireo radio sy televiziona tsy miankina samihafa. Tamin’ny 8 ora sy 45 minitra no nanombohan’izany raha tamin’ny 8 ora no nambara fa handefasana azy. Ny hampiasana ny fanafody antsoina hoe « covid organics » ho fisorohana ny aretina no anisan’ny nambarany tamin’izany, ary anisan’ny omena an’izany ireo mpianatra miverina mianatra manomboka ny 23 aprily sy 27 aprily. Fanontaniana maro no ataon’ny olona eny anivon’ny fiarahamonina sy any amin’ny tambajotra sosialy taorian’izany. Eo ihany koa ny fiverenana tsikelikely amin’ny fiainana andavanandro eo amin’ny mponina sy handraisan’izy ireo ny asany amina fotoana voafetra, amin’ny 6 ora maraina ka hatramin’ny 1 ora tolakandro. Talohan’io dia nisy ny fandraisana didim-panjakana tamin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny zomà 17 aprily ny fitohizan’ny « Etat d’urgence sanitaire » na hamehana ara-pahasalamana. Ary ny serasera rehetra atao amin’ny haino aman-jery dia manamafy hatrany ny fihibohana an-trano. Mbola nanantitrantitra izany ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny ady atao amin’ity « covid-19 » ity ny antoandron’ny alahady 19 aprily.
Ao anatin’ny fihibohana dia mbola mikatona ny Fiangonana tamin’ny alahady 19 aprily, ka tamin’ny televiziona sy radio no nanarahan’ny mpino ny vavaka, toy ny ao amin’ny EKAR izay niainga tao amin’ny katedraly Andohalo notarihin’i Mgr Pascal Andriantsoavina, ary nampitain’ny IBC radio sy televiziona. Nanao ny azy toy ny mahazatra ihany koa ny Radio Don Bosco (RDB). Mitodika hatrany amin’ny fangataham-pitahiana amin’Andriamanitra ny vavaka atao handresena ny areti-mandoza ‘covid-19’.
Fa zavatra nanaitra tamin’ny fahitalavi-panjakana TVM tamin’ny alin’ny alakamisy 16 aprily ny fisian’ny fandaharana manokana momba vehivavy brezilianina iray nandalo taty Madagasikara tamin’ny novambra 2019 naminany fa avy aty Madagasikara no ahitana ny fanafody manasitrana ny aretina mampiasa saina an’izao tontolo izao. Ary io fanafody io no hampanan-karena an’i Madagasikara. Nampidirina tao amin’ny horonan-tsary ny nambaran’ny filoha Rajoelina momba ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka. Totoafo ny dokam-barotra momba io fandaharana nalefa tamin’ny TVM io talohan’ny namoahana azy. Ny mpanamory ny fiaramanidina nitondra ity vehivavy avy any Brezila ity no nitantara ny momba ny diany taty Madagasikara. Nambarany fa miendrika lakroa ny zotran-diany teto Madagasikara, niainga tany Tolagnaro nankany Antsiranana, ary tany Maintirano nankany Toamasina.
Maneran-tany dia maherin’ny 2,5 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina ‘covid-19’ ary maherin’ny 178 000 no namoy aina tamin’ny 21 aprily. Mihazakazaka ny fisongan’ny isa satria teo amin’ny 2 tapitrisa no tratry ny tsimokaretina herinandro talohan’izany ary maherin’ny 126 000 no namoy aina. Anisan’ny be maty indrindra hatrany raha ny isa tamin’ny 21 aprily i Etazonia (maherin’ny 42 000), Italie (maherin’ny 24 000), Espagne (maherin’ny 21 000), France (maherin’ny 20 000) ary Grande Bretagne (maherin’ny 16 000). Ho an’i Madagasikara, dia 121 no nambara fa tratry ny otrikaretina ary 52 no sitrana tamin’ny 22 aprily raha 110 herinandro talohan’izay ary 29 no sitrana. Ary tsy misy ny aina nafoy hatramin’io 22 aprily io.
Marihina fa nanomboka niverina nivoaka ny gazety sasany raha toa gazety ( sisa no nivoaka teo (Express, Ao Raha, Jejoo, tia tanindrazana, La Gazette de laGrandeIle). Isan’ny niverina nivoaka ny La Vérité, Free News, araka ny hita eo amin'ny sary nalaina ny 22 avrily.